VIDEO: Xildhibaano katirsan golaha shacabka Somalia oo iska dhiibey magaalada Hargaysa. – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
VIDEO: Xildhibaano katirsan golaha shacabka Somalia oo iska dhiibey magaalada Hargaysa.
December 21, 2020 Xuseen 10
Puntlandtimes (Muqdisho)-Xildhibaano katirsan barlamaanka jamhuuriyadda federalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay iska dhiibeen magaalada Hargaysa ee xarunta maamulka Somaliland oo sheegay inuu ka goostay Soomaaliya inteeda kale.
Xildhibaan Mustafe Qodax oo kamid ahaa xubnaha aqalka sare ee barlamaanka Soomaaliya ee muddo xasaanadeedkoodu dhammaaday ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada Hargaysa isagoo sheegay inuu ka tanaasuley mowqifkiisii hore ee Soomaaliweyn.
Mustafe Qodax ayaa waxa uu sheegay inuu ka tanaasuley mowqifkiisii hore ee la xiriirey midnimada Soomaaliya isla markaan uu wixii hadda ka dambeeya ku biiri doono maamulka Somaliland iyo gooni goosiga gobolada Waqooyi ee Soomaaliya.
Waxa uu sheegay inay jiraan xubno lamid ah oo doonaya inay ka soo laabtaan magaalada Hargaysa isla markaana ay ku laabteen deegaamadooda isagoona xusay in Somaliland ay tahay wadan ka madax banaan Soomaaliya inteeda kale.
Tallaabadaan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu dhammaaday waqtigii rasmiga ahaa ee barlamaanka Soomaaliya waxaana hadahayaa dhacda in xubnaha aan kalsoonida ku qabin ku soo laabashada barlamaanka xiga ay sheegaan inay ku laabteen Somaliland.
GAAL LEEGO GALAY GADDOONKIISA MADHEERA oo kale miyaa ciyaartaan?!!!
Wuxuu ka quustay wax la yiraahdo koonfur, xasilloonidiisa iyo kala qeybsanaanteedisa, Sidaas darteed koonfur waxay noqotay dowlad-goboleedyo oo shan madaxweyne xukumaan. Marka wuxuu doorbiday inuu ku laabto dhulkiisa Republic of Somaliland. su’aashu Goormay koonfurey degi doontaa?
Lamahuraan waa cawska jiilaal. Min walboo daneystaba, mid walboo danmoodaba, mid walboo ka doorbida, danta Qarankee caamka, inuu aado Xamar, xilal uu kasoo hayo, waxa huran wakhtiga oo kolka uu gabaabsado, ma huraan dalkiisii ayuu dabada geliyaan.
Insha Allaah waxaan rajeynayaa in sharci kale laga soo saari doono. Sharcigaas oo ciqaab ay ku mudan doonaan cidkasta oo Xamar Aadaa. Waa in lasoo xidhaa darkan iska furan ee inta dakhliga masaakiinta Muqdisho ka qatantahay inta la’iska cuurto Hargeysa lagu dhisanayo. Taasi xaq iyo cadaalad toona maaha.
Kama hadlayo kuwa shaqo private ah ama ganacsi u aada, waxaan ka hadlayaa kuwa siyaasiyiin ku sheega ah ee munaafaqa, hagardaamada iyo xiqdiga ah ku xumeeda halkaas la aada. Bal u fiirsada,kan Ina Qodax oo kale inuu shaqeysto ayuu halkaas u tegay, kan Mahdi la yidhaa Hagardaamada uu Somaliland uu Somaliland ku hayo waa tii ugu xumeyd, kan imika Wasaarada Warfaafinta loo dhiibey isaga wixiisu waa xiqdi iyo ku xumee. Yacni Miisaan u oleleeyay oo xilbuu ii dhiibi waayay. Sharci adag waa in laga soo saaraa dadkan oo aanay is odhan waxaad doonto iska soo samee hadhow cafisbaa laguu fidine.
Mogadishu Boy says:
Ahmed Shiine,Marka hore Farmaajo Faasiq reer Mogadishu ma rabaan,kuwaan beesha caalamka sheegta iyo afrikaantaas gafuurka weyn ayaa meesha ku ilaaliya,reer Mogadishu ayaga ayaaba dulman oo gumeysi ku jira, Midda xigta reer Mogadishu wax dhib ah xagooda idikama soo gaarin haddii aad tihiin reer Waqooyi, laakiin reer Waqooyigiina cuqdad iyo xumaan ayaad noo qabtaan,mid bambo aad noo soo dhiibtaan iyo kuwo mafia ah oo aad noo soo dirtaan,laakiin Allah waa xaq soore godka aad noo qodeysaan idinka ayaa ku dhici doona insha Aalah,teeda kale waxaad mar walba leedihiin waa nala xasuuqay, yaa idin xasuuqay? Siyaad Baare iyo dowladiisa,waxaana ka mid ahaa Muuse Biixi Cabdi oo wuxuu ahaa cidaanka cirka,cadaalad haddii ay jirto maxkamadsoo saara oo ha ku soo rafanina Xamar iyo Kunfurta Soomaaliya,haddii aad rabtaan go’a oo ha soo laabanina,magaca Somali xitaa iska gooya oo la baxdaan Jaadland ama jaqafland, afka Soomaaliyana iska bedela Oromo ama amxaar ama Sawaaxili ku hadla, laakiin shartiina yeey na soo gaarin.
Suldaan salaan Sharafeed iga gudoon.Asxaabta kalana waan salaamay.
Ugu horeyn waan soo dhaweynayaa Ex Xil mustafe Qodax, waxaan leeyahay kusoo dhawoow dalkaagii aad xoogaa aad kayara dhuumatay adoo naftaada u xoogsi tegey muqdisho.
Qoodax waa nin markuu xamar joogey si Adag u dufaaci jirey waxa Somalilandta maanta ahi tahay iyo somaliland tii 1960 xoriyadeeda qaadatay isagoo ku salayn jirey waaqiciga iyo waxa Danta lama huraanku tahay oo ah xaqiiq qofwalba arkayo.
Ahmed shiine waan kugu raacsanahay in qodob adag laga soo saaro siyaasiinta xamar u daaq tegey marka Xoogaga shilmaadka AY BATUULO KKKKKK soo dhamaystaana Somaliland iska soo xaadiriya waayo markay Xamar joogena Cidna umay maqnayn Nacnacdooda iyo Somaliweyn beri hore Fidigtay (bakhtiday) ayay ku bariis cunayeen, waxaase xaq u lahaa lacagtaa dadka reer muqdisho aadna ugu baahnaa.
Cadaaladna maaha waana khalad ilaa iyo iminka aanay reer koonfureed arinkaa fahmin nin iska ordaya cidna aan matalin reer koonfur lacagta kaga gurto, inkastoo lacagtaba gaaladu ku biiliso marka xitaa lagu daro Armaajo Vilada kagu dhex ilaaliyo Suuligana ugaandhiis u furo.
Anyway soo dhawoow dalkaagii iyo dadkaagii dhinacagana la gal hawsha qaran ee ninwalba dhibaciisa kaga jiro.
Somaliland waa qaran maaha qabiil gaara leeyahay dadka sidaa aaminsanina Waa munaafaqiin dadka raba inay ka dhex kaluumeystaan laakiin waa lala socdaa filmkooda raqiiska ah.
Arrintani Dhulbahante ayaay astaan u ahayd, sida muuqatana haddeer Iidoor baa orod ku dhaafay! Kkk
Laga barte laga badi! Kkkk
CAQLIGAYGA SIDAY ANIGA ILA TAHAY, KOONFURTA AMA SOMALIA WAXAY KU FIICNAAN LAHAYD IYAGA OO ISKA SOO ERYA KUWA SOMALILAND SHEEGTA OO WAXBA UGU FADHIYIN, CULAYS IYO XIDHIIDHI AY ULA YIMAADAAN MOOYEE, ANIGU WAXAAN ODHAN LAHAA WAAR CAQLIGA ALLAH IDINKA QAADYE, XUBNAHA SOMALILAND KU BEDELA ALSHABAAB KA NAFTA IDIINKA SAARTAY, OO GUDDOOMIYE GOLAHA SARE IYO PRIME MINISTER KU XIGEEN IYO DHAWR WASIIR HADDAAD ALASHAAB SIISAAN, QARAX WAA IDINKA DEYN LAHAAYEEN, BALSE HADALKA NACASNIMADA LEH EE MEHDI IYO DUBBE, WALLEE WAA ISKU KIIN SII DIRAYAAN BERRINA WAA CARARAYAAN, XATAA ODAYGA MAALIYADDA EE BOQORKA AH, DEE FOOQIISII HARGEYSA DHAMAA, WAA MUWADDAN ASAL AH OO SHARAF LEH. WAAR KOONFUREEY ISKA SOO ERYA WAXMATARAYAASHA GAFANAHA AH, EE MARKAY XIL KA WAAYAAN HARGEISA IDINKA IDIIN SOO CARARA, HADDII KALE ISKU MEERAYSTA WALLIGIIN. SOMALILAND TOOS ULA HADLA IDINKA OO EEYDA ISKA ERYEY
Ashkhaastani way shaqo tageen,naftoodayna metelayeen we Somaliland ma metelayn,waxase laga qortaa suuqyada Xamar,hadase ka quuste sheekadaas ay ashkhaas Somaliland kasoo jeeda xukuumadooda Ku qurxistaan,iyagoo dad ka quustay Ku dabra is leh,ogaadena natiijo la’aanteeda,filimkii Midnimona quus buu kusoo dhamaaday,lamase waayo calooshii u shaqaystayaal Somaliland kasoo jeeda oo shilinku u muuqdo,waxayse sheekadaasu dhamaan marka si dhab ah loo kala gurto,Somaliland-na ay ka quustaan.
Midda lacagta Xamar laga qaato ee mushaharka ay u qaataan baarlamaanka Somalia ee labada aqal,xukuumada waxa bixiya caalamka,mana aha lacag canshuurta shacabka Xamar laga qaado,haday xataa tahay nimankani waa sida shaqaale ay shaqo u dirteen,mushahar u dhigma shaqadoodana ay siiyaan,waxase ka weyn dambiga ay dalkooda ka galeen,ayna ahayd in ciqaab u dhiganta la marsiiyo.
Ashkhaastaasu mar hadaanay waaqica Somaliland ka jira waxba ka bedelayn,markay kasoo daalaan,waxa meesha ka jirana soo ogaadaan cafis dalkooda kasoo dalbanayaan,kaasoo quusteen waa ilaah mahadii…
Xeedhada gunteeday soo taabteen,intay maqnaayeena sidii maxaabiis ayay meel Ku jireen.
Ahmed Shiine,Marka hore Farmaajo Faasiq reer Mogadishu ma rabaan,kuwaan beesha caalamka sheegta iyo afrikaantaas gafuurka weyn ayaa meesha ku ilaaliya,reer Mogadishu ayaga ayaaba dulman oo gumeysi ku jira, Midda xigta reer Mogadishu wax dhib ah xagooda idikama soo gaarin haddii aad tihiin reer Waqooyi, laakiin reer Waqooyigiina cuqdad iyo xumaan ayaad noo qabtaan,mid bambo aad noo soo dhiibtaan iyo kuwo mafia ah oo aad noo soo dirtaan,laakiin Allah waa xaq soore godka aad noo qodeysaan idinka ayaa ku dhici doona insha Aalah,teeda kale waxaad mar walba leedihiin waa nala xasuuqay, yaa idin xasuuqay? Siyaad Baare iyo dowladiisa,waxaana ka mid ahaa Muuse Biixi Cabdi oo wuxuu ahaa cidaanka cirka,cadaalad haddii ay jirto maxkamad soo saara oo ha ku soo rafanina Xamar iyo Kunfurta Soomaaliya,haddii aad rabtaan go’a oo ha soo laabanina,magaca Somali xitaa iska bedela oo la baxa Jaadland ama jaqafland, afka Soomaaliyana ku bedela Oromo ama amxaar ama Sawaaxili ku hadla, laakiin shartiina yeey na soo gaarin.
Kkkkkkkk caruur waar waa sirdoonka somaliland mustafe